कोरोनाभाइरसबाट निको भइसकेको विरामी पुनः संक्रमित हुने सम्भावना न्यून - Jhilko
कोरोनाभाइरसबाट निको भइसकेको विरामी पुनः संक्रमित हुने सम्भावना न्यून
कोरोना भाइरसका कारण मानव जीवनमा धेरै ठूलो क्षति पुगेको छ । यसको संक्रमण अत्यन्तै तीव्र गतिमा र क्रुर रुपमा फैलिरहेको अवस्था छ । कोरोना भाइरस बिरुद्ध प्रयोग हुने औषधि, अनुसन्धानको क्रममा रहेको र केही औषधि जस्तै hydroxychloroquine, azithromycin, vitamin C लगायतका औषधिको प्रभावकारिताबारे अनुसन्धान भइराखेको छ । यदि यसबाट संक्रमित भएर मान्छेले फेरि जीवन पाए भने के हुन्छ ? उसको प्रतिरक्षा क्षमता फेरि तन्दुरुस्त हुन्छ ? यो अहिले संसारमा नै बहस भइरहेको छ ।
जब हाम्रो शरीरलाई कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्छ, यसलाई हराउन हाम्रो शरीरले प्रतिरक्षा गर्छ र हराउन लड्न थाल्छ ।
मान्छेलाई यो भाइरसले संक्रमण गरेपछि यसको प्रतिक्रियामा ज्वरो, सुजन र प्रोटिनको गठन समावेश हुन्छ र जसले संक्रमणसँग लड्न मद्धत गर्दछ । हामीमा इम्युन प्रणाली मजबुत छ भने सामान्य रुघाखोकी, हल्का ज्वरोबाट नै यसलाई हामीले परास्त गर्नसक्छौं ।
एकपटक हाम्रो शरीरले संक्रमणका विरुद्ध लड्नका लागि (antibodies) प्रोटिनहरु निर्माण गरिसकेपछि फेरि त्यस किसिमको विरामी पर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ । यसो भनेर यसले सधैं काम गर्दैन । antibodies भन्नाले रोग लगेपछि त्यो रोगको बिरुद्ध शरीरले उत्पादन गर्ने प्रोटिनलाई जनाउँछ,त्यस पश्चात हुने संक्रमणबाट जोगाउँदछ ।
अनुसन्धानकर्ता, Ann Falsay, University of Rochester Medical Centre का अनुसार antibodies हरु संक्रमणका क्रममा बन्दछन तर यसको मात्रा बिस्तारै कम हुँदै जान सक्छ र फेरि अन्तत त्यो व्यक्तिमा पुन संक्रमण हुन सक्छ ।
त्यसैगरी कोरोना भाइरस अनुसन्धानकर्ता Matt Frieman,University of Maryland,School of medicine का अनुसार, पुन संक्रमण हुनसक्छ या सक्दैन भन्ने कुरामा अहिले पनि अनुसन्धान भइराखेकाले ठोस जानकारी दिन सक्ने प्रमाणहरु अझै फेला परिसकेका छैनन्। तर अरु भाइरसमा जस्तै पुनः संक्रमण गर्दा शरीरमा पहिले नै antibodies बन्ने भएकाले संक्रमणको असर भने कम देखिन सक्छ ।
तर पनि प्रायजसो एकपटक जितेको रोगसँग प्रतिरोध क्षमताको विकास शरीरले गरेको हुन्छ । यसैले कतिपय देशमा यो संक्रमणबाट निको भएका विरामीको रगत संक्रमितको शरीरमा दिने कार्य भएको छ । यो प्रयोग सकारात्मक भइरहेको मिडियामा आएको छ ।
खोपहरुले शरीरमा प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास गराउँछ । विरामीसँग लड्नका लागि प्रोटिनको उत्पादन बढाउँछ ।
कोभिड १९ का विरुद्ध लड्नका लागि शरीरमा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निर्माण गर्ने खालको खोप अझै अनुसन्धानको क्रममा नै छ । वैज्ञानिकहरु यसमा दिनरात लागेका छन्, आशा गरौं यसको निदान गर्ने खोपको विकास छिट्टै हुनेछ । कुराकानीमा आधारित
'मैले जसरी कस्ले राजीनामा दिएका छन्? अझ म अनैतिक र भ्रष्ट ? बात गर्छन !'